Fanesorana mpivarotra – Hanatsara ny toerana eny Mahamasina ny mponina - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fanesorana mpivarotra – Hanatsara ny toerana eny Mahamasina ny mponina
Mety amin’ny ankamaroan’ireo mponin’i Mahamasina ny fanesorana ireo mpivarotra hani-masaka sy zava-pisotro mahamamo eny an-toerana. Nanangana fikambanana mihitsy ireo mponina mba hanajary ny toerana ho lasa mahafinaritra. “Hanome tànana ny kaominina Antananarivo renivohitra (Cua) amin’ny fananganana ireo fotodrafitrasa, toy ny zaridaina, io fikambanan’ny mponina io”, hoy
ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, lefitry ny tale kabinetran’ny Cua.
Toa nisentom-pifaliana kely mihitsy ireo mponina manodidina, taorian’ny nanalana ireo mpivarotra ireo. “Mampanahy amin’ny ho avin’ny mpianatra ny fisian’ny toerana fimamoana toy ireny. Efa nahazo fampitandremana avy amin’ny Cisco mihitsy izahay noho ireo mpivarotra toaka manodidina anay ireo”, hoy ohatra Razafindrakoto Charlotte, talen’ny Lycée Moderne de la Capitale. “Tsy ny mpivarotra no tsy tian’ny mponina fa ny loto sy ny tsy fandriampahalemana ateraky ny fivarotana”, hoy kosa Andrianary Verohanitra, mponina eny Mahamasina.
Mbola hodinihin’ny komity manokana kosa ny toerana homena ireo mpivarotra nalàna teny an-toerana.
Fanadinana andrana – Misy 8 taona ny mpianatra etsy amin’ ny EPP Analakely hanao Cepe(0)
Saika ireo mpianatra avy amin’ny sekoly tsy miankina foana hatramin’izay no ahitana ireo zandriny indrindra amin’ny ankizy hanao fanadinana Cepe. Manana ankizy mahay toy izany koa anefa ny eny amin’ ny sekolim-panjakana Epp, na dia 6 taona aza ny zaza vao raisina mianatra eny. Isan’ireny Ratsidiarinambinina Finarintsoa, 8 taona, mpianatra etsy amin’ny Epp Analakely. Izy no isan’ ireo zandriny indrindra niatrika ny fanadinana andrana, omaly, tao Analakely, izay nahitana
Fifanakalozana – Misy maka amin’ny antsasa-bidiny ireo vola tapaka(0)
Fitadiavana hafa kely haingana. Mahay mitady vola ny olona sasany, ary miainga amin’ny zava-misy avokoa izany. Taorian’ny fotoana tsy andraisan’ny olona ireo vola rovitra na misy “scotch” dia efa misy olona manakalo sy manao asa fitadiavam-bola amin’izany. Ireo somary misintaka kely ny renivohitra no tena sahy manao io asa io ary vidiany amin’ny antsasa-bidy izay vola atakalo. Misy ihany koa
Podium eny Antsonjombe – Mety ho voaelingelina kely ny Lycée sy Ceg Analamahitsy(0)
Ho voaelingelina kely amin’ny “podium”. Sekoly roa mifanila amin’ ny sehatra “coliseum” etsy Antsonjombe, hanao- vana ny fampisehoana hira sy dihy na “podium”, ny Lycée sy Ceg eny Analamahitsy. « Ny fotoana hanaovan’ny teknisianina andrana ireo fanamafisam- peo no mety hanelingelina amin’ny fampianarana, fa efa karazan’ny mirava izahay amin’ny fotoana hanombohan’ny podium. Efa mampihatra ny ora ririnina izahay izao ka amin’ny 5 ora sy sasany no mirava », hoy Rakotonirina Jean, proviseur ao amin’ny Lycée Analamahitsy, izay misy mpianatra 750 sy mpanabe 40.
Fanabeazana – Nidina hatramin’ny 10% ireo ankizy miditra an-tsekoly(0)
Ny ho avin’ny ankizy mihitsy no iharan’ny krizy, araka ny fanadihadiana nataon’ny banky iraisam-pirenena. Natolotra omaly teny Anosy ny valin’izany fanadihadiana izany, ary nifototra tamin’ny fiantrankain’ny krizy eo amin’ny fanabeazana ambaratonga fototra. “Mitombo hatrany ireo ankizy tsy tafiditra eny amin’ny sekoly ambaratonga fototra, manodidina ny 600 000 na 10%-n’ny ankizy izany hatramin’ny nisian’ny krizy tamin’ny 2009. Maherin’ ny 255 000 kosa no mitsoaka an-daharana
Sokatra 250 Tody any amin’ny toerana hiompiana azy, any Ifaty Toliara ny alatsinainy teo ireo sokatra 250, nisy namoaka an-tsokosoko ka tratra tany Tailandy. Ny fikambanana mpiaro ny sokatra PSA sy ny Salamandre Nature ary ny kaompania Air Mada- gascar no nifarimbona namerina azy tany amin’ ny toerany nisy azy ireo. Sokatra 2 570, toa azy ireo, ahiana ho lany tamingana no efa ompiana ao amin’io faritra nana- terana azy
Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 09:48	FIARAHAMONINA
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	« Fetim-pirevena »
Olana tamina fiantsonana – Minisitra sy mpitsara nifampitory, hivoaka anio ny didy
Halatr’omby tany Ankazobe – Dahalo iray maty, olona 4 naratra mafy tamin’ny fifandonana